Protest strike hits Zimbabwe as pressure on Mugabe grows
Riot police patrolled through Zimbabwe's capital Harare on Wednesday as a call for a national strike against President Robert Mugabe's economic policies closed businesses and crippled the public transport system.
Zimbabwean police arrest anti-Mugabe protesters
Zimbabwean police arrested 15 people, including a journalist and the brother of a missing political activist, during a public protest against President Robert Mugabe, a lawyer said Friday.
Zimbabwe frees 2,000 prisoners, asks them to quit crime
Zimbabwe has pardoned 2,000 prisoners to make space in its overcrowded jails with authorities appealing to the released convicts not to return to a life of crime, state media reported Thursday.
Several thousand Zimbabweans joined a march through Harare in support of veteran President Robert Mugabe on Wednesday after the main opposition party staged its own rally last month.
‘50 million Africans face hunger after crops fail again’
Up to 50 million people in Africa will need food by Christmas as a crisis across the continent triggered by El Niño worsens, the United Nations (UN) and major international charities have warned.
Zimbabwe halves 2016 growth forecast to 1.4 percent
Zimbabwe cut its economic growth forecast to 1.4 percent in 2016 from an initial forecast of 2.7 percent, the ministry of finance said ...
Tourist Attraction: Zimbabwe Victoria Falls And Zambezi River
According to the United Nations World Tourism Organization (WTO), there are millions of international tourist that visit Africa every year. The beautiful southern African country Zimbabwe holds several tourist attractions and one of the greatest natural wonders of the world (Victoria falls). Tourism is Zimbabwe’s fastest-growing industry. The country offers a large variety of scenery, one of…
TB Joshua 'curses' Zimbabweans for lying against him